Haimen Xinrong Electric Co., Ltd yasekwa ngowe-1999, omnye umenzi yobungcali ezizodwa kuphando, uphuhliso kunye nokuveliswa umnini isibane oveni . Siya ise Liuhao Town, Haimen City, kufuphi Shanghai port, kunye ukufikelela zokuhamba lula. Zonke iimveliso zethu ukuthobela nemigangatho kwemigangatho amazwe ngamazwe kwaye kuthakazelelwa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kulo lonke ihlabathi.
Sinikeza iintlobo ezahlukeneyo lomnini isibane lezonka, umnini yethu ibhalbhu oven ngokuqhelekileyo esetyenziselwa eziko igesi, eziko umphunga ecocekileyo, eziko umphunga, zalapho izibane oveni. Products ikakhulu kumazwe angaphandle eItali, Turkey, kuMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla kunye nomgangatho yethu ezibalaseleyo, ixabiso ekhethekileyo ngokupheleleyo ngenxa yoncedo lwabathengi basekhaya angaphandle!
Wonke abasebenzi inkampani kwethu yonke lwabathengi kulo elimiweyo kunye nemigaqo: Inkonzo ngokufudumeleyo na ngaphambi; umgangatho lokulawula Sisiseko zophuhliso; igama Sisiseko ukusinda. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, ungaqhagamshelana nathi ngalo naliphi na ixesha kwaye siza aphendule kuwe kamsinya kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu okanye ungathanda ukuxoxa umyalelo esingabizi, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Sijonge phambili ekusekeni nobudlelwane kwezoshishino ngempumelelo kunye nabathengi amatsha ehlabathini lonke ihlabathi.